संसदीय रछ्यानमा रमाउनेहरूलाई लाल सलाम ! | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home गृहपृष्ठ संसदीय रछ्यानमा रमाउनेहरूलाई लाल सलाम !
संसदीय रछ्यानमा रमाउनेहरूलाई लाल सलाम !
पछिल्ला दिनहरूमा संसदीय व्यवस्था एउटा राजनीतिक समस्या बन्न पुगेको छ । राजनीतिका नाममा घृणित खेल खेल्ने थलो बन्न पुगेको छ, संसद् । हिजो भन्ने गरिन्थ्यो, खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो संसद् ।
आज प्रमाणित भएको छ । भय र भ्रम सिर्जना गरेर संसद्वादीहरूले देशलाई गलत ढङ्गले उपयोग गरिरहेका छन् । जसको कारण देश बर्बाद हुँदैछ । राजनीतिक अराजकता कायम भएको छ । उत्कृष्ट व्यवस्था भनिएको संसदीय व्यवस्था हिजोआज निकृष्ट बनेको छ । लामो समयसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय भएर नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन गरेर संसदीय रछ्यानमा रमाइरहेका छन् ।
विशाल छिमेकीहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल यतिखेर राजनीति र कूटनीति सन्तुलन खलबलिएर असफल, कमजोर हुँदै उपनिवेशतर्फ उन्मुख हुँदैछ । प्राचीन देश, सदासर्वदा स्वतन्त्र रहँदै आएको देशमा बहुदलीय व्यवस्थाका धुन्धुकारी नेताहरूको कारण विदेशीको अवाञ्छित दबाब र अनुचित हस्तक्षेप बढिरहेको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू र राष्ट्रको नीति, निर्माण तहमा रहेका कर्मचारीतन्त्रको अदूरदर्शी, भ्रष्ट बुद्धि, अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण नेपाल र नेपालीको दुर्गति हुँदै गइरहेको छ । गुट, फुट, लूट र दलालीको संस्कार बढ्दै संसदीय घृणित राजनीति खेलमा लागेका कम्युनिस्ट दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको गैरकम्युनिस्ट चरित्र यतिखेर आएर छर्लङ्ग भएको छ ।
कम्युनिस्टहरू बिग्रिंदै बिग्रिंदैनन्, बिग्रिएपछि बर्बाद हुन्छन् । बोरामा राखेको एउटा आलु सड्न थालेपछि सबै सडेर जान्छन् भनेझैं कम्युनिस्ट अगुवा नेताहरूको गलत चरित्र, व्यवहार र पूँजीगत दलालीपनले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रसातलमा पु¥याएको छ । जनमानसमा कम्युनिस्ट भनेपछि घृणा, वितृष्णा जगाएको छ ।
सक्कली कम्युनिस्टको आवरणमा थोरै नेता तथा कार्यकर्ता छन् तर कम्युनिस्ट आन्दोलन उठाएर विजयको शिखरमा पु¥याउन निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अब कम्युनिस्ट चरित्र, सिद्धान्त र व्यवहारप्रति दृढ सङ्कल्पित व्यक्तिहरूले आफूलाई देशभक्त क्रान्तिकारीको पहिचानसहित कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारमा आधारित भएर आन्दोलित हुने हो भने देशका विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
कम्युनिस्ट सिद्धान्त र कार्यप्रति आस्थावान् रहेका सबै व्यक्तिले नयाँ एकताका साथ वर्तमान विकृति, विसङ्गतिपूर्ण संसदीय व्यवस्था र यस व्यवस्थाको आडमा अवसरवाद, दलालवाद, पूँजीवाद, आत्मसमर्पणवादतर्फ उन्मुख व्यक्तिहरूलाई सदाका लागि राजनीति बिदाइ गर्न जरुरी छ । यो समयको माग र वर्तमान नेपालको आवश्यकता हो ।
राजनीति एवं कूटनीतिक सन्तुलन, नयाँ विचार र व्यवहारविना यथास्थितिमा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । पुराना राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताको ठाउँमा नयाँ जुझारु र प्रगतिशील नेता कार्यकर्ताको जमात बढाएर प्रभुत्व जमाउन नितान्त जरुरी छ । यसको लागि एकीकृत जनक्रान्ति, जनमत सङ्ग्रह हुँदै वैज्ञानिक समाजवादका लागि निरन्तर राजनीतिक यात्रा जारी राख्नुपर्दछ । यसका लागि उत्तम समय अहिले रहेको छ ।
भ्रष्ट, दलाल नेताहरूका कारण संसदीय व्यवस्था पूर्ण असफल भई यसको विकल्पमा नयाँ व्यवस्था रोज्नु बाध्यता हुन आएको छ । अबको लडाइँ खराब व्यक्तिगत प्रवृत्ति, खराब राजनीति, विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध हुनुपर्दछ । यस साइबर युगका युवाहरूको एकता, मध्यमवर्गीय जनताको सहयोग र समर्थन, सर्वहारा वर्गको सक्रिय सहभागिता भए क्रान्तिकारी देशभक्त आन्दोलनद्वारा देशको भविष्य समुज्ज्वल र नेपालीको समुन्नति गर्न सकिन्छ । नक्कली कम्युनिस्टहरूले कब्जा गरेको संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर नयाँ राजनीति व्यवस्था जो नेपाली हावा, पानी, माटो सुहाउँदो निर्माण गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रघाती शक्तिको पतन नै नेपाल र नेपालीको उत्थान हो । असफल संसदीय व्यवस्थाका कारण नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्न नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ । चुनौती धेरै छन्, जटिलता धेरै छन् तर असम्भव भन्ने कुरो केही छैन । आवश्यकता परेपछि आविष्कार हुन्छ । महाप्रलय गर्ने राजनीतिकाल आइसकेको छ ।
देशलाई नेतृत्व गर्ने सुलक्षण भएका नेता र कार्यकतर्Fको कुनै कमी छैन । संसदीय व्यवस्थाबाट आम परिवर्तनकामी नेपाली जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । यो राजनीति दुर्घटना र राजनीति परिवर्तनको पूर्वसङ्केत हो । संसदीय व्यवस्था र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आर्यघाटमा अन्तिम संस्कारका लागि पु¥याउने प्रमुख पात्रहरू कम्युनिस्टको खोल ओढेका नक्कली कम्युनिस्टहरू हुन् । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका समर्थक मस्तिष्क र गैरकम्युनिस्ट व्यवहार एकैसाथ जान सक्दैन ।
मानवजीवनमा द्वन्द्व भइरहन्छ । तथाकथित वामपन्थीको सोचविचारले अब नेपाल सञ्चालन हुनै सक्दैन । आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि शासन सत्ता र संसदीय व्यवस्थामा रहेका प्रजातन्त्रवादी र माक्र्सवादीहरूको प्रवृत्ति खराब देखिएकाले अब अवस्था र व्यवस्था झन् खराब र बर्बाद हुन नदिन जनहस्तक्षेप छिटो गरेर राजनीतिक निष्कर्ष र परिणाम ल्याउनुपरेको
Previous articleवन संरक्षण – वर्तमानको खाँचो
Next articleकुनै राष्ट्रपति लक्षित अभियानले व्यापार पुनर्संरचना असम्भव –डब्ल्युटिओ